Saaxiibbtinimada Turkiga iyo Soomaaliya waa mid mudan in la- ilaaliyo}: W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud | RBC Radio
Saaxiibbtinimada Turkiga iyo Soomaaliya waa mid mudan in la- ilaaliyo}: W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud
Saaxiibbtinimada Turkiga iyo Soomaaliya waa mid mudan in la- ilaaliyo
Sucuudigu wuxuu noqday Dalka koobad ee Madaxweynaha Soomaaliya ee cusub MD Farmaajo uu booqdo. Kadib doorshadisii, Soomaaliya waxay xiriirka u jartay Iran Sucuudiga dartiis, waxaa kale oo igu maqala in Ciidan Soomaaliya uu Sucuudigu Qortay si ay ula daggalaman Xutiyiinta Yaman.
Waan ogahay in dhawan ladoortay hooggaanka sarre ee Soomaaliya welina an ladhamaystirin hay’addihii Dawladda oo an la soo dhisin Golaha fulinta Soomaaliya ee siyaasadda dalka hagi doona laakiin waxaan doonaya inaan iftiimoyo Dawladda sida dhabta noo garab istagtay iyo mida danaha qarsoon innaga leh.
Rajeb Dayib Ordogaan iyo Qoyskiisa Soomaaliya ayey booqdeen 2011
Dawladda Madxweyne Maxamad Cabdulahi Maxamad (Farmaajo) Hoggaaminayo waa inay Ilaaliso Saaxiibbtinimada Soomaaliya iyo Turkiga” waana inay ka feejignaato danaha qarsoon ee Sucuudiga.
Dalka Turkiga waa Dal weyn oo muslim ah waana awooda koobad cudud milatari dhaqaalo iyo isku dubni ee Dawlad Islama mida ugu weyn Qarnigan 21.
Soomaaliya,oo nus qarni Dawlad la’an ahayd waxay ku tiirsan tahay kaalmada dunidu siiso Dalka Turigu wuxuu Soomaaliya ka kalmeeyey dhan kasta’ sida arrimaha bulshada, arrimaha Ciidanka, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha siyaasadda, iyo xitaa jiritanka Qaranimo ee Soomaaliya.
Turkishku wuxuu noqday Dawladda Kobad ee Soomaaliya si hagar la’aana isu garab istagtay xiligii ay Abaaruhu ka dhaceen dhanka koonfureed ee Soomaaliya.
Sannadkii 2011, markii ay Dowladda Soomaaliya u qeylo dhaansatay Caalamka, markasoo qeybo kamid ah Koofurta Soomaaliya( Abaarta) xun kudhufatay, Turkigu wuxuu, ahaa Waddankii ugu horeeyay ee usoo Gurmmada Soomaaliya, iyadoo R/wasaare Rajeb Dayib Ordogaan iyo qoyskiisa, ay soo gaareen Muqdisho, iyagoo booqday Xeryaha dadka kasoo barakacay abaarta.
Dalka Turkigu wuxuu Soomaaliya u qabtay kuna caawiyey kaalmo aad u badan sida Gargaar Dhaqaale, waxbarasho kaabayaasha, arrimaha bulshada sida dhismayal Cisbitaalo, Iskuulo, iyo Cawinta Ciidanka Soomaaliya.
Turkigu wuxuu Soomaaliya kafurtay Safaarada ugu weyn caalamka ee dalka Turkigu ku leeyahay Dibada.
Turkigu wuxuu deeq waxbarasho siiyaa Ardayda Soomaaliyeed, wuxuuna Tababara Ciiddanka Cirka Soomaaliya, Diyaarrada Turkish Airline ayaa Muqdisho toos uga degta waana diyaarad heer caalamiya.
Turkigu wuxuu dhexdhaxaadin u sameyey Soomaalida wuxuuna gacanta ku haya wada hadalada maamulka Somalind iyo Dawladda dhexe ee federalka. Si meesha looga saaro tuhunka iyo madmadowga soo kala dhex galay ummadda Soomaaliyeed.
Waxas oo dhan markii la isku soo duubo waxay muujinaysa heerka tageero ee Turkigu u fidiyey Soomaaliya xili Dunida mulimku Soomaaliya ka indho qarsatay.
Haddaba Soomaaliya hada waxay u’ egtahay mid dhabbihii Dawladnimo cagta sartay waxaana Soomaaliya kadhacay Doorshooyin hannaan fiiican ku qabsoomay.
Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Maxamad Cabdulahi farmaajo oo ah Madaxweynihii ugu shacbiyada badna ee Soomaaliya yelato tan iyo Burburkii kadib waxaa looga fadhiya inuu xiriirkii Turkiga iyo Soomaaliya sii xoojiyo weliba loo Abaal gudo Shacbka iyo Dawladda Turkiga.
FG: Qormada xigta waxaan kusoo qaadan doona danaha qarsoon ee Sucuudiga
Cabdinuur Faarax Maxamuud: abdinuur02@gmail.com